यस्तो देखियो कलाकारको ‘डिनर टाइम’, शरिर मेन्टेन राख्न के के खादिनन् प्रियंका ? (भिडियो) – An Online Entertainment News Portal
HomeGalleryCelebrityयस्तो देखियो कलाकारको ‘डिनर टाइम’, शरिर मेन्टेन राख्न के के खादिनन् प्रियंका ? (भिडियो)
May 14, 2018 sutraentertainment Celebrity, Entertainment, Event, Kollywood, News, Videos 0
फिल्म ‘शत्रु गते’ को ५१ औं दिनको समारोहमा नेपाली सेलिव्रेटीहरुको खानपिनको सौखको बारेमा केही कुराहरु सार्वजनिक भएका छन् । नेपाली सिने जगतसँग सम्बन्धित केही कलाकारहरु के के खानमा सौखिन छन् भन्ने कुरा समेत जान्ने मौका मिलेको छ । नअभिनेत्री प्रियंका कार्कीलाई सलाद, फलफुल धेरै मन पर्ने रहेछ ।
उनले घरमा तथा जहाँ भएपनि राइस कम तथा फलफुल, दाल धेरै खाने बताईन् । उनी भेज खाना धेरै रुचाउछिन् तर, मासुमा चिकेन खान मन पराउछिन् । त्यस्तै, कलाकार जितु नेपालले आफू रोटी र सागपातको सौखिन भएको बताए । उनले बेलुका गएको चार बर्षदेखि भात खान छाडेको बताए ।
सन्तोष र पूजाको प्रेमले पायो ‘पिजी’ प्रमाणपत्र